Ukwakha iphethini entsha yentuthuko Insimbi enhle kufanele isetshenziswe ku "blade" -Ingxoxo noLuo Tiejun, Iphini Likamongameli we China Iron and Steel Association - China Foshan Hermes Steel
Ukwakha iphethini entsha yentuthuko Insimbi enhle kufanele isetshenziswe ku "blade" -Ingxoxo noLuo Tiejun, Iphini Likamongameli we China Iron and Steel Association
"Ngaphansi kwendlela entsha yentuthuko, imboni yensimbi kumele ifake amathuba amasha ngokuzayo kusuka ekwakheni ibhalansi entsha yokuhlinzekwa kwekhaya kanye nokufunwa nokubamba iqhaza ekubambisaneni nasezingeni eliphakeme lamazwe omhlaba." ULuo Tiejun, iphini likamengameli weChina Iron and Steel Association, usho lokhu engxoxweni ekhethekile abe nayo neXinhua News Agency muva nje. Ukuvuselelwa kwenguquko ekwakhiweni kohlangothi lokuphakelwa koHlelo “Lweminyaka Emihlanu Emihlanu” kumelane nokuvivinywa kwengcindezi yonyaka okhethekile ka-2020. Imboni yensimbi, emi endaweni yokuqala entsha yentuthuko, izoqhubeka nokuguqula ngokuqinile futhi kancane kancane athuthukise amakhono ayisisekelo embonini kanye nezinga lesimanje leketanga lezimboni. Thatha izinto ezintsha zesayensi nezobuchwepheshe njengesiqalo sokwenza ngcono ikhwalithi kanye nezinga lokuphakelwa, bese uvumela insimbi enhle ukuthi isetshenziswe "emkhakheni".
Bengingalindele! ” U-Luo Tiejun ukhumbule unyaka owedlule ka-2020, “Ngikhathazeke kakhulu ngokuthi imali yenkampani izophuka futhi imboni izolahlekelwa yimali. Ngenxa yalokho, akukho ukulahleka ngenyanga. Kumane nje kuyindaba yokuthi uthola inzuzo engakanani. ”
Imininingwane yeChina Iron and Steel Association ikhombisa ukuthi ngonyaka wezi-2020, inzuzo yezinkampani zensimbi efakwe ezibalweni ezisemqoka ibilokhu inyuka unyaka nonyaka kusukela ngoJuni, kanti isilinganiso sesikweletu-mali siqhubekile sancipha unyaka nonyaka. Inzuzo ephelele etholwe unyaka wonke igcine ukukhula.
"Ngonyaka odlule, ukuvuselelwa okuqhubekayo komnotho waseChina kuholele imboni yensimbi ukuba yeqe obekulindelekile." U-Luo Tiejun uthe, "Elinye iphuzu elibalulekile ukuguqulwa kwesakhiwo sohlangothi lokuhlinzeka. Eminyakeni embalwa edlule, izinkampani zensimbi zenze imali futhi isimo sazo sezimali sithuthuke kakhulu. ”
U-Luo Tiejun ukholelwa ukuthi imboni yensimbi ikhombise amandla aqinile wokulwa nobungozi ngenxa yokuthuthuka okungaguquki kwezinguquko zokwakhiwa kohlangothi lokuhlinzeka kanye nezinzuzo eziphelele zezinkampani zezimboni eziqoqwe eminyakeni edlule.
Lezi zinzuzo zizoqinisekiswa ngo-2020 lapho ubhadane lomhlaba lubhebhetheka. Ngonyaka we-2020, ngakolunye uhlangothi, imboni yensimbi yezwe lami ibambe iqhaza elibalulekile ekuhlinzekweni kwezimo eziphuthumayo, usizo lwezokwelapha, ukuqala kabusha komsebenzi nokukhiqiza, kanye nokusimamiswa kochungechunge lokuhlinzekwa kwezinkampani zezimboni; ngakolunye uhlangothi, umthamo wokufunwa nowokukhiqizwa kwemboni yensimbi yaseChina zombili zishise kakhulu ngesikhathi esifanayo, kuholele ekwandeni okukhulu kokungeniswa kwensimbi, futhi ukungeniswa okunezigaba kwensimbi ongahluziwe sekuqalile ukwakhiwa kusuka ngoJuni.
"Njengezwe elikhiqiza insimbi elikhulu kunawo wonke emhlabeni, iChina ayigcinanga nje ngokufaka ingcindezi emthonjeni wokukhiqiza emhlabeni, kepha yahlinzeka ngemakethe ebanzi yokugaya amandla okukhiqiza insimbi emhlabeni," kusho uLuo Tiejun.
Uma ngibheka emuva kowezi-2020 ongavamile, umkhiqizo wezinsimbi wezwe lami uqhubekile nokusebenza ezingeni eliphakeme eliqhutshwa ukufunwa okunamandla komfula, kukhombisa ukuqina okuqinile komnotho wezwe lami; ngasikhathi sinye, intengo yensimbi ethengwa kwamanye amazwe yehla kakhulu, yaphinda yashaya amaphuzu obuhlungu embonini. Injabulo nokukhathazeka kwemboni yensimbi nensimbi kumane nje kuwumlando wokungena kwezwe lami esigabeni esisha sentuthuko kanye nezinguquko ezintsha emathubeni nasezinseleleni.
Emi endaweni yokuqala entsha “yoHlelo Lweminyaka Emihlanu Emihlanu”, imboni yensimbi ingavala kanjani ukushiyeka kwayo futhi iqale kahle?
U-Luo Tiejun uveze ukuthi umfutho wokunwetshwa kwamandla, izingqinamba zemvelo ezihlala ziqinile, ukuthembela okuphezulu kwizinsizakusebenza zangaphandle, kanye nokugxila embonini ephansi kusazoba yizinselelo ezibhekene nomkhakha wensimbi isikhathi esizayo. "Imboni yensimbi isenamaphutha okumele iwasebenzise ekusheshiseni ukwakhiwa kohlelo oluyisisekelo lwezimboni nokwakha uchungechunge lwezimboni zesimanje."
“Ukwenza ngcono ukwakheka kwezimboni kubaluleke kakhulu ukuqinisa amandla esisekelo sezimboni. Ngenxa yobunzima bezinsizakusebenza zensimbi, eminyakeni yamuva nje, izinkampani ezintsha zensimbi zezwe lami zithambekele kakhulu ekukhuleni ngasogwini. ” U-Luo Tiejun uthe, lesi yisimo setheku lasogwini, izindleko zezinto zokusebenza, kanye nesiqinisekiso sezinto ezingavuthiwe Umphumela ongenakugwemeka wezinzuzo eziningi njengamandla ezemvelo.
Kodwa wabuye waveza nokuthi ukwenza ngcono ukwakheka kwezimboni kwemboni yensimbi nensimbi akukwazi “ukungena”. Umugqa ophindwe kabili kumele ube yisikhala sokudinga izimakethe zesifunda kanye namandla nezinsizakusebenza namandla ezemvelo, futhi ibhalansi yalo lonke isakhiwo sezimboni kufanele icatshangelwe ngokuya ngokuthi ukhuphuka nomfula wechungechunge lwezimboni ungaxhunyaniswa ngokuphelele yini.
"Umkhakha wensimbi kumele ushintshe umqondo wendabuko wokuzimela, unciphise ukuthunyelwa kwemikhiqizo ejwayelekile, ukhuthaze ukungeniswa kwemikhiqizo yensimbi eyinhloko njengama-billets, futhi unciphise ukusetshenziswa kwamandla ne-iron ore." U-Luo Tiejun uthe imboni yensimbi izokujulisa ukuguqulwa kwesakhiwo sohlangothi lokuhlinzeka futhi ikunqande ngokuqinile ukwehliswa. Umthamo wokukhiqizwa kwensimbi ongahluziwe, ukuhlakulela ngokujulile indlela yokuthuthuka eluhlaza nekhabhoni ephansi, okuholela ekunikezelweni okusha kwasekhaya kanye nokulinganiselwa kokufunwa ngokuhlinzekwa kwekhwalithi ephezulu, nokubamba iqhaza ekubambisaneni kwamazwe omhlaba kanye nokuncintisana.
U-Luo Tiejun uthe ngokwethulwa kochungechunge lwezinqubomgomo ezihambisanayo kanye nokwenza ngcono kohlelo njengokufakwa kwamandla, ukungeniswa kwezinto ezisetshenzisiwe zensimbi ezenziwe kabusha, kanye nokunyuka kwekhabhoni, imboni yensimbi nensimbi kufanele isebenzise izindlela zokukhuthaza ukuhlangana kanye nokuhlelwa kabusha nokwenza ngcono yokuvuselela kabusha izinsiza zensimbi ezilahliwe ukuze kusatshalaliswe kahle izindawo ezingasogwini nezingaphakathi ezweni. Amandla wokukhiqiza, ngokuqhubekayo akhuthaza ukubambisana kwamandla omkhiqizo wamazwe omhlaba, kancane kancane athuthukise amakhono ayisisekelo embonini kanye nezinga lesimanje leketanga lezimboni, futhi asebenzise ukuqanjwa kwesayensi nobuchwepheshe njengamandla amakhulu wokuthuthukisa ikhwalithi nezinga lokuphakelwa, ukuze insimbi enhle ingasetshenziswa njenge "blade".
Ukubhekana nekusasa, liyini “ibhande” lomkhakha wensimbi?
U-Luo Tiejun uthe kuyadingeka ukusebenzisa amathuba ngokuya ngesisekelo secebo lokwandisa ukufunwa kwasekhaya. Ngokuthuthuka okunamandla kwe-5G + Internet Internet, ukutshalwa kwezimali kwezwe lami kwingqalasizinda entsha nokukhiqiza okuthuthukile kuyaqhubeka nokwanda, okuqhubeka nokufaka umfutho omusha ekuvuseleleni ukufunwa kwensimbi ezimbonini zensimbi ezisezansi ezifana nezimoto, izinto zasendlini, nemikhiqizo ehlakaniphile.
"Ukuhlanganiswa nokuhlelwa kabusha kwamaketanga ezimboni akhuphukayo nawasezansi kunesidingo esisha somkhakha wensimbi ukuze kuthuthukiswe imboni ngaphansi kohlelo olusha lwentuthuko." U-Luo Tiejun ugcizelele ukuthi kuyadingeka ukusheshisa ukuhlanganiswa nokuhlelwa kabusha ngaphakathi kwemboni, nokuqhubeka nokukhuthaza ukubambisana okusha namabhizinisi akhuphukayo nasenhla ochungechungeni lwezimboni ukuqinisa amabhizinisi asezansi nomfula kanye nezikhungo zocwaningo ziyasebenzisana ukuze kusungulwe ukuhlangabezana nalokhu okwanda njalo izidingo zabasebenzisi futhi bandise futhi baqinise uchungechunge lwezimboni.
Uthe "i-Belt and Road Initiative" iholela ezingeni eliphakeme lokuvulwa, futhi iphinda ilethe amathuba amasha ezinkampani zensimbi ukuthi "ziye emhlabeni wonke". Imboni yensimbi inezici zokuqina kokutshalwa kwezimali okuphezulu nokufaneleka kwezimboni okuqinile, futhi ingumbambiqhaza odingekayo ekwakhiweni kwekhwalithi ephezulu ngokubambisana kwe- "Belt and Road".
"Ukubambisana kwamazwe omhlaba kungenye yezindlela ezibalulekile embonini yensimbi yaseChina ukufuna uguquko nokwenza ngcono." U-Luo Tiejun uthe izinkampani zensimbi kumele zilibambe ngokuphelele ithuba lokwakha kabusha uchungechunge lwezimboni zomhlaba wonke, futhi ngasikhathi sinye zihlaziye ngokunengqondo isikhala sokubambisana kwamakhono omhlaba wonke, zikhulise ukusebenzisana nokubambisana, futhi zibone ukuma kwe-Cooperative, kuqiniswe ukuvimbela ubungozi, futhi kulwele ukudala izinzuzo ezintsha zomhlaba wonke zokuncintisana ngokubambisana komthamo wamazwe omhlaba wokukhiqiza.